China Ukusila khabhayithi Rods abavelisi kunye nabathengisi | Mingtaishun
YG10XSebenzisa ngokubanzi, ngobunzima obushushu obushushu. Ukulungele ukugaya kunye nokubumba isinyithi ngokubanzi phantsi kwe-45 HRC kunye neAluminiyam, njl. Cebisa ukuba usebenzise eli bakala ukwenza i-twist drill, mills ukuphela, njl
ZK30UF Ukulungele ukugaya kunye nokugrumba isinyithi ngokubanzi phantsi kwe-HRC 55, intsimbi yentsimbi, intsimbi engenasici, i-aluminium alloy, njl njl. Cebisa ukwenza i-drill, i-milling cutters, i-reamers kunye neetephu.
GU25UF Suitble for wokugaya titanium ingxubevange, intsimbi lukhuni, ingxubevange eliyinjubaqa phantsi HRC 62.
Cebisa ukwenza amatye okusila ngesantya esiphezulu sokusika kunye nokuereamer.
Ubungakanani beNkozo μm
Uxinano g / cm3
Hayi / mm2
Umgangatho weemveliso zethu ulingana nomgangatho we-OEM, kuba iinxalenye zethu eziphambili ziyafana nomthengisi we-OEM. Ezi mveliso zingasentla zigqithile kwizatifikethi zobungcali, kwaye asizukuvelisa kuphela iimveliso ezikumgangatho we-OEM kodwa siyakwamkela uku-odolwa kweeMveliso eziCwangcisiweyo
Egqithileyo Iintonga zeCarbide zeSamente ezingenanto